မထူးတဲ့ တနေ့ | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
အလွဲလေးတွေက..မချိုသင်းရဲ့ မူပိုင်ပေါ့။ နောင်ဆို..ကတွတ်ပီ တို့လို..မောင်ရိုးတို့လို စီးရီးစ် အတွဲလိုက် ထုတ်လို့ရပြီ။ ဟိ - ( ကျမ ထုတ်ဝေမယ်..ဦးထားပီ)
အော်- ဟိုနေ့က.. ဦးဘကြည်ကာတွန်းအကြောင်း သေချာ လာရှင်းပြထားတာ ကျေးဇူးပဲနော်။ လိုအပ်ရင်..အဲဒီ အချက်ကလေး အသုံးပြုမယ်နော်။ ခုထဲက ခွင့်တောင်းထားပြီ။
ရူးနှမ်း ဖတ်ပြီးပြီးချင်း ဘာပြောရမှန်းကို မသိဖြစ်သွားတာ။
ဘာပြောရမှန်းမသိတာကိုပဲ မန့် သွားလိုက်တော့တယ်။ ခုထိတော့ တွေးမိတိုင်း ပြုံးမိသေးတယ်။ :D
ပုံမှန်လေးပဲ အဆင်ပြေပါတယ် ချိုသင်းရယ်..။
အမက နောက်ဆုံးပိတ်ကျမှ ..
အချီကြီးဆော်ထည့်လိုက်တာပဲ... တနေ့စာကို တလုံးတည်းနဲ့ ကာမိအောင် လုပ်လိုက်တာ ဖြစ်မယ်
ဒီတစ်ခါတော့ မန့် သွားပြီ။
အစ်မလည်း..လွဲတတ်တာပဲ ပြန်ပြောပြရင်ရယ်စရာကောင်းပေမယ့် အဲ့လိုလွဲတဲ့အခါတွေကျရင်တော့ တော်တော်အခက်တွေ့တယ်ဗျ ။ ယူနန်..ရှူးနမ်း)
အဟဲ အန်တီချိုတို့ကတော့လွဲကိုလွဲရမယ်..။ လူကဲခတ်သင်တန်းဘယ်တော့စမလဲဗျာ.. စာရင်းပေးထားချင်လို့ပါ။
ဟီးဟီး ရူးနှမ်းနေတယ် ။ တနေ့ လုံး ဟုတ်နေပြီးမှ မမရယ်။
လင်းနဲ့ အတူတူနေရင်တော့ တစ်ယောက်တလှည့်လွဲနေတာနဲ့ ၊ ပါးစပ်ကို ပိတ်ရမယ်မထင်
အဲဒီနေ့က အလွဲ က
အဲသလောက်နဲ့ ပြီးသွားတာပဲ လား..
မမ တို့ ညီမလေး တော်လာပြီ....း)...
နောက်ဆုံးပိတ် အိပ်နဲ့လွယ်တာပေါ့လေ...း)
မမိုးချိုသင်းရယ်.. ထောင်မှုးမြဟုတ်ရပါဘူး။ အမြတ်တနိုးလုပ်ပေးထားတဲ့ အိုးနဲ့ပေါက်လိုက်ရတယ် ဆိုကတည်းက
ကိုအကျော် ဘယ်လောက်ဆိုးနေလဲမှ မသိဘာနော်။
မိအေးအော်တာပဲ မြင်တယ် ဂဏန်းညှပ်တာမမြင်လို့နေမှာပါ။
အစ်မ MCT ကြီးကလုပ်ပြန်ပါပီ ၊၊ ကောင်းပါတယ် ၊ လုပ်ပါ ၊၊ :)
လှထုံက လှထုံပဲ ကောင်းပါတယ်။ မယ်ဖေါ့ အတင်းသွားဖြစ်ချင်နေရင် ပင်ပန်းတယ် ငါ့အစ်မရာ...။
ရူးနန်း ပါပဲ မလှထုံ..
မြို့တက်မဲ့ယောက်ျကိားကို မိန်းမ ကသေချာမှာတယ။် စ်ိတ်ချစမ်းပါကွ။ ငါဒီလောက် မအပါဘူးလို့ ဖြေတယ်
အိမ်ပြန်လာတော့ပိုက်ဆံအိတ်က ခါးပိုက်နှိူက်ဆီပါသွားပြီ. မိန်းမကဆူတော့ ဒါတောင် ဟိုကောင်တွေ တစ်နေကုန် ချောင်းနေတာကွ.။ ညနေကျမှ ပါသွားတာပါလို့ ကိုယ်ရည်သွေးပါသေးသတဲ့
မချိုသင်းရေ.. ရုံးမှာ ဖတ်နေရင်းနဲ့ ရီလိုက်ရတာ အနားက လူတွေတောင် ကြည့်ခံရတယ်။ မန့်ချင်တာ အိမ်ရောက်မှ ပြန်မန့်နေရတယ်... အခုလည်း ပြန်ပြောပြရင်း ရီနေပြန်ပြီ.. စိတ်ညစ်တာတွေ ခဏပျောက်သွားလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမရေ.. စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်လိုက်တာ မချိုသင်းရယ် မမ KOM ရယ် နှစ်ယောက်များ ပေါင်းမိရင် ပါးစပ်ကို ပိတ်ရမှာ မဟုတ်ဘူးလို့... မမရဲ့... bottleneck post ကို သတိရတယ်။ :D
ပုံမှန်စိတ်လေးနဲ့ နေတာက ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ် မမိုး...
ပုံမှန်နေရင် ဒီိလောက်ကြီးတော့ မမှားနိုင်တော့ဘူး...
သိပ်တော့ အားရှိလှတယ် မဟုတ်ပါဘူး...
ဒီနေ့ လဲ ယူနန်သူရဲ့ ချွေးမ မျက်နှာသိပ်မကောင်းဘူး...
မချိုသင်းကို လူဆိုးကြီးလို့ မထင်မိပါဘူး။ အစ်မရေးလိုက်တာ ကျောက်ခဲလေးတွေနဲ့ ဆုံးသွားလို့ ဖတ်သူတွေ စိတ်ထဲ အဲဒါကျန်ခဲ့တာ ထင်ပါတယ်။ :D
ဟုတ်တယ် တို့အမက တကယ့်သနားစရာ။ အမဘက်ကပါပေးမယ် အားငယ်ပါနဲ့။
အမ ဇာတ်သိမ်းသွားပါပြီခင်ဗျာ။ စောင့်နေရတဲ့အတွက် ဆောရီးပါခင်ဗျာ
ထွက်ခတ် ခတ်တယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးနေမယ်...
ဘော့စ် ရဲ့ ညီအရင်း ခေါက်ခေါက်ကို လက်ခါပြလိုက်တာ မြင်ယောင်မိပြီး ရယ်ချင်မဆုံး...
ကိုကျော့်ကို သနားတယ်ဆိုတာ အလကား အလကားပြေတာ။ အမချိုသင်းကမှ တကယ်သနားစရာလေးပါ။ တနေကုန်မလွဲတာ နောက်ဆုံးပိတ် လွဲချလိုက်သပေါ့လေ။
Dear Moe Cho Thin
I am your reader. You are so cute. I love you everything. I saw you on the photo of monestery in US that you are helping something with your hubby.
Whatever you write, it is so cute and interesting.
ရေနစ်သူကို ၀ါးထိုးကူတာ မဟုတ်ရပေါင်ဗျာ...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လူအကဲခတ် တော်တာကို မှတ်ထားလိုက်မယ်။ ကြည့်ရတာ သူဌေးညီကို အားရပါးရ အကဲခတ်ခဲ့ပုံပဲ။ ဥပဓိရုပ် မကောင်းဘူးတဲ့။ အဟီး... ဟုတ်နေတာပဲနော်။
ဘယ်ဟုတ်ရမလဲ ချိုသင်းရယ်.. အဲဒါကမှ ပုံမှန်..
ဆရာမက စဉ်းစားနေတာ .. ဘာမှမဖြစ်ရင် ချိုသင်းတော့ ပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူး.. ဒုက္ခလို့ ..
အင်း..ဒီတခါတော့ မချိုသင်းလွဲတာမဖြစ်နိူင်ဘူး..ဘိုသံဝဲအောင်ပြောလိုက်တဲ့ ကောင်မလေးလွဲတာပဲဖြစ်၇မယ်...ကျနော်တွေးတာ လွဲသွားလားမသိဘူးနော်..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မချိုသင်းပို့စ်တွေကိုဖတ်ရတိုင်း ပြုံးပြုံးကြီးဖြစ်ဖြစ်သွားရတာတော့ မလွဲဘူးဗျ....
Creative Common License ကျွန်တော့် ဘလော့လေးအတွက် လုပ်ချင်လို့ပါ။ ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲ သိရင်ပြောပြပါဗျာ။
That is funny. My feeling is down today. I think I feel better now. I miss you cho thin.
အရေးကောင်းလွန်းတယ်ထပ်မပြောတော့ဘူး။ မြှောက်တယ်ဖြစ်နေမယ်။ နောက်ထပ် အလွဲတွေ ထပ်လွဲ ပါဦး..
ဘာပြောရလဲ... ဘာပြောရမလဲ... နောက်မှလာဖတ်တော့ ကိုယ်ပြောချင်တာ အပေါ်ကဘော်ဒါတွေ အကုန်မွှေနှောက်ပြောပြီးသား ဖြစ်နေတယ်။
သေချာတာ တစ်ခုကတော့ မခင်ဦးမေနဲ့ မချိုသင်းသာ ဆုံပြီး အငြိမ့်ကရင်.. လူရွှင်တော် လာလုပ်မယ်ဗျာ..နော်..:D
ကြည့်တဲ့ပရိတ်သတ်တွေ အကုန်ထွက်ကျကုန်မယ်ထင်တယ်..း)
သိတ် ဘိုဆန် ချင်တာကိုး။ ချိုသင်းမ မှားဘူး